Human Resources - Groupe Holding Huaihai
Hevitra amin'ny mpanjifa
Fiaran-dalamby mpandeha Gasoline
Bises an'ny herinaratra
Fitaovana angovo vaovao
Sarana momba ny môtô
Huaihai International Development Corporation dia subsidiary an'ny Huaihai Holding Group. Ilay orinasa dia ao amin'ny Xuzhou Economic and Technological Development Zone (National Level) Huaihai Zongshen Industrial Park. Izahay dia orinasa multinasionalista manokana momba ny fampandrosoana sy ny fikarohana, famokarana, varotra sy fantsona tambajotra moto, fiara elektrika ary kojakoja. Ny vokarintsika dia amzarina any amin'ny firenena sy faritra 60 mahery toa an'i Afrika, Azia ary Afrika Atsimo, miaraka amin'ny fanondranana entana amerikanina USD 50 millon. Ny orinasanay dia manaraka ny paikady «fehikibo, lalana iray, fampandrosoana ny any ivelany», ny orinasanay dia maka marika tsy miankina sy fantsom-barotra tonga lafatra ho tombony mifaninana. Mandritra ny 2-3 taona ho avy, hanangana toby fanamboarana 3-5 izahay ary birao 10 mahery mba ho orinasa orinasa marika any china.
Miaraka amin'ny lohahevitry ny fandriampahalemana sy fampandrosoana, izao tontolo izao dia mihamahazo mifaninana amin'ny toe-karena sy ny siansa ary ny teknolojia. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena tsangana matotra, ny fifaninanana eran-tany eo amin'ny orinasa, amin'ny famakafakana farany dia ny fifaninanana ny fahendren'olombelona, ​​ny kalitao feno sy ny fampandrosoana ny loharanon'olombelona ary ny fitantanana ny fifaninanana. Ny talenta no fototry ny orinasa, io no loharano sarobidy indrindra ary ireo mpanapa-kevitra ny fivelomana sy ny fampandrosoana ny orinasa. Ho an'ny orinasa tsirairay izay mampivoatra haingana sy fandraisana anjara mavitrika amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena dia tsy maintsy mifantoka amin'ny loharanom-pandrosoana ara-toekarena amin'ny fitantanana mahomby sy fampandrosoana ny loharanon-karena sy ny loharanom-baovao.
Ny fitantanana ny loharanon-karena ao Huaihai dia mifikitra amin'ny foto-kevitry ny toekarena eo amin'ny tsena ary manome antoka ho an'ny fampandrosoana haingana an'i Huaihai.
Alefaso azafady ny CV anao amin'ny huaihaihaiwai@126.com
Mpandrindra varotra any ivelany
Miaraka amin'ny traikefa fiasan'ny varotra mihoatra ny 3 taona, efa zatra amin'ny fizotran'ny varotra vahiny
Fanam-piaraha-miasa tsara ekipa, fahaizana mianatra matanjaka, mari-pahaizana diplaoma na ambony, nahazo diplaoma amin'ny teny anglisy anglisy, lehibe varotra iraisam-pirenena, marketing lehibe na fitantanana orinasa.
CET6 na ambony.
Operation e-commerce miampita sisintany
Fantatra amin'ny tontolo iainana sy ny fitsipiky ny varotra amin'ny sehatra ara-barotra an-tserasera ny orinasa.
Mahaliana amin'ny fitsipika malefaka, rohy fifanakalozana, fampiroboroboana mailaka, fampiroboroboana SNS, fampiroboroboana BBS ary fomba fampiroboroboana hafa.
Feno fahalalana fahalalana anglisy.
Serivisy aorian'ny famarotana
Farafahakeliny 3 taona no niainany tolotra aorian'ny varotra tany amin'ny varotra vahiny.
Ny ambaratonga ambony kolejy na etsy ambony dia zatra ny asa any ivelany izay miasa any ivelany.
Farafahakeliny 3 taona no niainana fitantanana kojakoja amin'ny indostrian'ny varotra vahiny.
Sekolin'ny oniversite na etsy ambony, manana fahaiza-manao fanoratana kely.
Antontan-taratasy sy raharaham-barotra
Farafahakeliny 3 taona no niainany amin'ny antontan-taratasy sy ny fomba amam-panao any amin'ny orinasam-barotra vahiny.
Ny mari-pahaizana bakalorea na etsy ambony, ny lehibe amin'ny varotra iraisam-pirenena, ny fitantanana orinasa, CET4 na ny ambony.
Ny kaonty vidiny
Mihoatra ny 3 taona niasan'ny finazy an-tsokosoko tamin'ny indostrian'ny varotra mekanika na avy any ivelany, mahazatra amin'ny famatsiam-bola iraisam-pirenena, hetra, sns.
Ny mari-pahaizana Colleage na etsy ambony miaraka amin'ny lehibe amin'ny fitantanana kaonty sy fitantanana ara-bola.
Ny iray izay manana traikefa amin'ny fitantanana ny vidiny dia aleony.
Huaihai-Zongshen Industrial Park, Faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia ao Xuzhou, Jiangsu, Sina